Ụbọchị My Pet » Olee otú Ịhụnanya nwere ike na-unu nke Nsogbu?
emelitere ikpeazụ: Jan. 10 2021 | 2 min agụ
Ahụmahụ nke na-ada na ịhụnanya bụ ihe ọ bụla kwesịrị inwe ọ dịkarịa ala otu ugboro na ya / ndụ ya. The ihe ọma bụ na e nwere nnọọ ole na ole ndị na-adịghị ùgwù iji nwere a magburu onwe ahụmahụ.
Ọ bụ ezie na njem nke ịbụ na ịhụnanya bụ mmetụta uche na-edozi, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-eme ka inwe a ịhụnanya ndụ oké mkpa. Ịhụnanya pụrụ n'ezie ị nọgide na-nsogbu; na-agụ na ịmara otú.
Ị ga-ta ji nwayọọ nwayọọ na
Gịnị pụrụ ịbụ ihe a ibu nsogbu karịa achọ ochie? Ịhụnanya pụrụ ịkwụsị gị na-ada na-eri anụ na-nká. Ị maara banyere oxytocin (na romantics ezo aka na ya dị ka ịhụnanya hormone)? Ịhụnanya na-eme ka na-arụpụta dịkwuo na larịị nke oxytocin na mmadụ. Oxytocin akpali mmepụta nke DHEA, a hormone mara maka mgbochi ịka nká uru.
Ị na ị hụ otú gị na anụ glows mgbe mmekọahụ? Unu na ị hụrụ otú energetic ị na-eche ụtụtụ mgbe? Ndị a niile bụ n'ihi na nke na-emegide ịka nká uru nke DHEA.
Ịhụnanya na-akụzi na ị na-enwe obi ike
Ọdachi ma ọ bụ ala obi ike nwere ike na-eduga otu ihe, a nsogbu ndụ. Ọ nwere ike na ị kwụsị na-ezi ọrụ; o nwere ike na-egbochi gị ime onwe gị nụrụ n'oge mkpa, na-emecha na-amanye gị aka ịnọgide a nta kwadoro karịa ihe kwesịrị ka i na-.
Otu n'ime ihe ndị kasị mma n'akụkụ mmetụta nke ịhụnanya bụ a agbam ume na obi ike. Mgbe ị na-ekere òkè a banye ná mmekọrịta ịhụnanya onye mgbe onye ahụ na-eme ka ị na-eche dị ka a Superman / superwoman. Ee, onye gị na ike na-akatọ gị maka ihe ụfọdụ, ma n'ozuzu gị mgbe niile na-anọgide na ihe kasị mma maka ya / ya. Nke a ga-akpaghị aka instate onwe-kweere na ị na-eme ka ị na-a ọzọ nwee obi ike onye; na mgbe i nwere obi ike ọkara nke nsogbu gị na-edozi.
Ịhụnanya nwere ike na-gị pụọ ọgwụ ọjọọ
E nwere ike ịbụ a mma mgbochi ụfọdụ ma ọ bụ ihe ngwọta nye iji ọgwụ ọjọọ eme karịa ịhụnanya. Ndị ahụ na-United States na-nsogbu n'obi nke ukwuu na-eto eto ọnụego nke umi ọjọọ; ịhụnanya nwere ike ịbụ ihe ngwọta kasị mma nsogbu a.
Àgwà dị ka ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ịṅụ oké mmanya na-emekarị byproducts nke ịda mbà n'obi. A ụtọ n'alụmdi na nwunye jupụtara n'ịhụnanya nwere ike na- ịda mbà n'obi na n'ọnụ mmiri na ike si otú belata onye Ohere nke ịdaba ọgwụ ọjọọ na ịṅụbiga mmanya ókè budata.
Ịhụnanya na-egbochi ebute ná Mmekọahụ
Mgbe ị hụrụ n'anya na onye, ị bụghị nanị na-atụ anya ya / ya na-eguzosi ike n'ebe ị, kamakwa agbasaghị izere ihe ọ bụla scratchy n'azụ onye ahụ azụ. Iji na-etinye ya ihe n'ezoghị ọnụ, ndị mmadụ na ịhụnanya adịghị ezere site n'itinye imekwu mgbalị iji na-erubere ya na nke ahụ bụ n'ụzọ bụ isi n'ihi na ha achọghị imerụ onye ha hụrụ n'anya. Ma, Olee otú abịa nwere ike jikọrọ na STD mgbochi?
E nwere ihe a mara mma ike njikọ.
Ndị mmadụ na ịhụnanya ruru ha tryst iguzosi ike n'ihe na-emekarị na-eme adịghị fancy nwere otutu mmekọahụ na nke a na n'aka-ebelata ha Ohere na-emepe emepe ebute ná Mmekọahụ. Ee, ọ bụ dị mfe dị ka na.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime nsogbu ịhụnanya pụrụ ichebe gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe ndị ọzọ ịhụnanya nwere ike ime, dị nnọọ hụbara n'anya.